Njem nlegharị anya na Luxembourg | Akụkọ Njem
Njegharị n'èzí na Luxembourg
Mariela Carril | | Luxembourg, Ihe ị ga-ahụ
The Grand Duchy nke Luxembourg bụ otu n'ime ihe ndị mara mma aga Europe Ma n'ihi ọnọdụ ya, ọ nwere oke ihu ala na-eche maka ndị njem ahụ niile hụrụ n'anya n'èzí na ọrụ ya.
Ọ dị n'etiti Germany, France na Belgium na naanị ọkara nde ndị bi na ya ọ bụ obere, ala na-enweghị mmiri, nke nwere usoro ọchịchị nke ọchịchị n’isi, ọtụtụ ugwu ndị dị ala, osimiri na oke ọhịa ndị mara mma na ahịhịa juru. Ya bụ, ntọala kachasị mma maka njem nlegharị anya.
1 Njegharị n'èzí na Luxembourg
2 N'ụlọ na ebe e wusiri ike na Luxembourg
Dịka anyị kwuru na mbụ, mbara ala ndị mara mma nke Luxembourg bụ ihe na-adọrọ adọrọ ma na-atọ ụtọ, yabụ ọ kachasị mma ịga njem iji chọpụta ha. Nwere ike ịga ije ma ọ bụ njem igwe kwụ otu ebe, ịrịgo, gaa na nke okike ma ọ bụ hụ ubi, osimiri na ọdọ mmiri.
Obodo ọ bụ paradaịs maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè Ya mere, o nwere ọtụtụ ụzọ akọwapụtara: 600 kilomita nke ụzọ ụgbọ ịnyịnya na okporo ụzọ, 300 kilomita ndị ọzọ ka a na-adọta na 700 kilomita ndị ọzọ nke ụzọ ugwu ndị gafere oke ọhịa ndị ahụ mara mma nke obere obodo ahụ nwere.
Mpaghara ọ bụla na-enye ndị mmadụ otu na otu njegharị ịgba ígwè. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịdebanye aha maka otu, ị ga-ebu ụzọ gaa akwụkwọ tupu oge eruo. Enwere ụzọ 5 dị elu maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè: RedRock MTB Haard Black, S2 Mullerthal Classics, Römerrunde, Cycle Path du Center na Vennbahn. A na-echekwa netwọọdụ mba nke usoro okirikiri nke ọma ma mejupụta ụzọ 23 gafere mpaghara dị iche iche nke Luxembourg.
Echiche bụ ịga ije na nsọtụ ọdọ mmiri na osimiri, soro usoro ụgbọ oloko ochie, gaa na ọmarịcha obodo na ihe ndị ọzọ. Arefọdụ bụ Charly Gaul .zọ, ihe Camino Osimiri atọ, nke jangeli na Nicolas Franz, nanị ịkpọ aha ole na ole. A na-atụ aro ije bụ okirikiri triangle gburugburu Schengen na Ọkara Réimech: 180 nkeji na a price nke 10 euro ọ dịghị ihe ọzọ.
Na usoro nke hiking e nwekwara a 5zọ Uzo Mgbago XNUMX kacha elu: Utezọ 2 nke lezọ Mullerthal, Ezọ E2-GR5 nke Europe, Trazọ Traumschleife na Natzọ NaturWanderPark Delux. Ha niile na-agafe oke ohia, ọdọ mmiri na osimiri na obodo ochie. Ọtụtụ ụzọ gafere steeti na ụfọdụ ndị ọzọ gafere oke ya.
Ndị na-eme njem nwere ike ịhọrọ n'etiti ụzọ 40, 50 ma ọ bụ 60 kilomita, ụzọ mpaghara na mpaghara yana ụzọ isiokwu. Iji maa atụ, ụzọ gafere Top 5 na-ekpuchi ihe karịrị kilomita 112 ma mejupụta ụzọ atọ, utezọ nke 1, 2 na 3. will ga-eleta obodo nta, oke okwute, ọgba, oke ọhịa na mmiri iyi. Ọ bụrụ na ịhọrọ utezọ 2, Escarpardenne Lee, ị ga-aga njem dị kilomita 53 n’okporo ụzọ ndị kpọdara akpọda na ugwu ndị jupụtara na ha na-agabiga Ndagwurugwu lush Sure na ihe igwe ya na obodo nta ya.
Na usoro nke flora na fauna Luxembourg na-enye anyị ntọala atọ okike: Haard, Strombierg na Haff Réimech Nature Reserve. Nke mbụ bụ mpaghara echedoro kemgbe 1984 wee kpuchie mpaghara hectare 198. O nwere ụzọ nke ya isi tufuo ma na-enye nzọ ụkwụ mmụta. Strombierg na-akpọghachite anyị n'oge ahụ, na oge ahụ a na-egwupụta akụ na mba ahụ. Taa, o nwere osisi na-echebe ya na ọtụtụ anụ ọhịa.
Zọ a dị kilomita 4.5 n’ogologo ma malite n’okpuru Schengen Bridge.
N'akụkụ ya, Haff Réimech Nature Reserve dị n'akụkụ ubi vaịn, n'etiti Schengen na Remich, mpaghara bara ọgaranya na ahịhịa na anụmanụ. Emeela ebe nchekwa akpọrọ Biodiversum n'agwaetiti keakamere, ihe owuwu ọgbara ọhụụ nke na-enye anyị ohere ịmata ụdị ndụ dị iche iche nke Luxembourg na ihe Steeti na-eme iji chekwaa ya.
Dị ka anyị kwuru ná mmalite, mba ahụ na-enyocha ọtụtụ osimiri na ọdọ mmiri na Top 3 osimiri na ọdọ mmiri nke Luxembourg nke a bụ ọkwa: Lake Alto Sûre, Lakes Remerschen na Lake Echternach. Nke mbụ dị n'ime obi nke ogige mba ahụ nke otu aha ahụ ma bụrụ ọdọ mmiri ọdọ mmiri nke etolitere na 1961. O nwere hectare 380 na ebe a na-eme ọtụtụ egwuregwu mmiri, gụnyere ụgbọ mmiri, gụnyere ịkwọ ụgbọ mmiri.
Haff Rèmech Nature Reserve nwere hectare 80 na enyo mmiri ya na-enye gị ohere iji ụgbọ mmiri na-agba ịnyịnya, na-egwu mmiri na azụ. Ọdọ mmiri Echternach dị n’ebe a maara nke ọma na Luxembourg, n’etiti otu mpaghara dị hekta 375 na-acha akwụkwọ ndụ.
O bururu hekta iri atọ na ise n ’azụ, ị nwere ike ịkwọ ụgbọ, ụgbọ mmiri, ifufe na azụ. N'ime ihe ndị a niile, tinye ụlọ mposi n'ụgbọ mmiri ebe ị nwere ike iri nri n'ụgbọ.
N'ụlọ na ebe e wusiri ike na Luxembourg
Dị ka mba ọ bụla dị na Europe E nwere ụkọ nke castles na ochie wusiri ike ileta. Enwere ihe dị ka 50 na ọtụtụ n'ime ha ka eweghachiri ma nwee ike ịga nleta. Onwere uzo di nke amara dika Ndagwurugwu nke Ogidi Asaa nke gafere site na ndagwurugwu Eisch, ebe mara nma n’ebe odida anyanwu nke obodo a.
Ma anyị nwere ike ime ya Ulo elu 5 kacha elu: Obí nke Grand Dukes, Vianden Castle, Bourscheid Castle, Beaufort Castles na Clervaux Castle. Na Obí nke Ukwu Dukes bụ otu n'ime ihe kachasị mma na isi obodo, na narị afọ nke XNUMX Flemish Renaissance style na mma ndị mara mma. Enwere ike ileta ya naanị n'oge ọkọchị, rịba ama na (nleta sitere na etiti June ruo mmalite Septemba).
El Vilọ Viandem Ọ bụ nnukwu ụlọ ewuru nke wuru n’etiti narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX na nnukwu ụlọ Rom ochie na ebe mgbaba Carolingian. Ọ bụ otu n'ime ụlọ mgbe ochie mara mma nke biri na Europe n'oge Roman na Goth. Na narị afọ nke XNUMX ọ ghọrọ ụlọ nke Conden de Vianden dị ike, metụtara ụlọ ikpe German na mgbe e mesịrị House Nassau na House Orange.
Ọ nọ n'aka nke steeti kemgbe 1977 ma weghachiri ya ịgbanwe ya ka ọ bụrụ otu ụlọ kacha mma na Europe. Onwere ndu njem, ugwo nke ndi ndu ajuju ma mepee site na 10 rue 6 rue. Maka nke ya Oulọ Bourscheid Ọ nwere akụkụ nwere akụkụ atọ ma wuo ya n’elu ugwu dị otu narị mita na iri ise n’elu Osimiri Sûre.
Ọ malitere n’afọ 1000 tupu o jiri nkume mee e ji osisi rụọ. Ọ na-anọchi na mkpọmkpọ ebe Roman, Merovingian na Carolingian na ọ bụ ụlọ ndị Romanesque Gothic. Mgbidi dị n'èzí nwere ụlọ elu asatọ na ụbọchị site na narị afọ nke iri na anọ ma jupụta na iwu nchekwa dịka turrets, bastilaị arti, a moat with a drawbridge na ndị ọzọ. Steeti zụtara ụlọ mkpọmkpọ ebe ahụ na 1972 wee weghachi ya. Enwere njem njegharị ma ọ mepee site na 11 ruo 4 elekere.
na Obodo Beaufort Ha bụ ụlọ ochie abụọ: n'otu akụkụ bụ Old Castle nke Beaufort, gụnyere a moat, akụkụ ndị kacha ochie nke malitere na narị afọ nke 30, nwere akụkụ nwere akụkụ anọ na mgbidi abụọ. Ọ dị na mkpọmkpọ ebe mgbe afọ 20 gachara ma wughachi ya na usoro Renaissance mgbe e mesịrị, ọ bụ ezie na site na narị afọ nke XNUMX ọ bụbu mkpọmkpọ ebe ọzọ. Ọ bụ naanị na XNUMXs nke narị afọ nke XNUMX ka e weghachiri ma meghee ndị ọbịa.
Ulo ozo di na ajuju bu Renaissance nnukwu ụlọ nke Beaufort malite na 1649 ma ghara ịta ahụhụ ọ bụla. E bi n’ime ya ruo n’afọ 2012 ma n’afọ 2013 meghere ọha na eze. Naanị ya na-anabata njem nlegharị anya n'oge site na Tọzdee ruo Sọnde site na elekere 11 nke ụtụtụ ruo elekere anọ nke mgbede ma ị ga-edebe n'ihi na ọ bụ naanị otu ndị ruru mmadụ iri na abụọ ka a na-anabata. Can nwere ike ime ndoputa n'oge ọ bụla n'afọ.
N'ikpeazụ, Lerlọ nnukwu Clervaux, nke e wuru na mmiri ma mee baptizim Nwanyị ahụ. O nweghi mmalite ọ bụla ma ọ dị ka ọ dị na ndị Rom ma ọ bụ ndị Celts. Akụkụ kacha ochie malitere na narị afọ nke iri na abụọ mana ọ gbanwere ka oge na-aga na ụzọ ndị nwe ya dị iche iche. Taa ọ nwere ụlọ ihe ngosi nka, Museum of the Battle of Bulge (1944 - 1945), na foto na dọkụmentị sitere na nchịkọta akpọrọ Ezinụlọ nke Mmadụ, nke Edward Steichen dere: Foto 503 nke ihe karịrị ndị foto 200 na mba 68 dabere na ọrụ, ezinụlọ, ọmụmụ, agụmakwụkwọ, agha, na ndụ mmadụ.
Ọ bụ nchịkọta bara uru nke egosiputara n'ọtụtụ oge na MoMA na New York. Njegharị ebe a dị ihe dị ka awa atọ ma ọ bụrụ na ị gbakwunye nleta obodo ahụ, chọọchị ya na abbey. Ruo ugbu a edemede anyị taa banyere ihe Luxembourg na-enye ndị njem nleta. Ọdịdị, ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme. O doro anya na a hapụrụ anyị na pipeline mana echere m na nke a bụ magnet zuru ezu iji dọta anyị, ọ bụghị ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Luxembourg » Njegharị n'èzí na Luxembourg
Why Porto bụ ebe kachasị mma Europe na 2017
Njem gaa Taormina, na Sicily, ihe ị ga-ahụ ma mee